Soo-saarista Wareegga Wareegtada Shiinaha iyo Warshad | Xinrui
Shaashadda gariirka waa adeegsiga gariirka gariirka oo ay soo saarto gariirka iyo shaqada. Miisaanka wareegga sare ee gariiriye ayaa ka dhigaya dusha sare ee shaashadda inuu soo saaro gariirka cyclotron, halka miisaanka hoose ee wareega uu ka dhigayo dusha sare ee shaashadda inuu soo saaro gariirka wareega ee wareega, iyo saameynta isku dhafan waxay ka dhigeysaa muuqaalka shaashadda inuu soo saaro gariirka isku-dhafan ee isku-dhafan. Socodkeeda gariirku waa qalooc adag oo dhanka wareega ah.
Shaashadda gariirka waa adeegsiga gariirka gariirka oo ay soo saarto gariirka iyo shaqada. Miisaanka wareegga sare ee gariiriye ayaa ka dhigaya dusha sare ee shaashadda inuu soo saaro gariirka cyclotron, halka miisaanka hoose ee wareega uu ka dhigayo dusha sare ee shaashadda inuu soo saaro gariirka wareega ee wareega, iyo saameynta isku dhafan waxay ka dhigeysaa muuqaalka shaashadda inuu soo saaro gariirka isku-dhafan ee isku-dhafan. Socodkeeda gariirku waa qalooc adag oo dhanka wareega ah. Qalooca waxaa loo qorsheeyay inuu yahay wareegga diyaaradda jiifka ah iyo xusul diyaaradda taagan. Weynaanta waxaa lagu beddeli karaa iyadoo la hagaajinayo xoogga kicinta ee kor iyo hoos u wareegaya dubbaal culus. Adoo hagaajinaya wajiga booska Xagasha sare iyo hoose, qaabka qalooca ee socodka dhaqdhaqaaqa dusha shaashadda iyo socodka dhaqdhaqaaqa walxaha shaashadda dusha sare waa la beddeli karaa.
Shaashadda wareejisa Wareegtada waa nooc shaashad ballaaran oo birqaya, oo inta badan loo isticmaalo baarista dhuxusha, nuuradda, quruuruxa, birta ama macdanta aan birta ahayn iyo waxyaabo kale, taas oo la xiriirta badbaadada shaqaalaha. Ma jiraan wax muhiim ah oo ku saabsan nabadgelyada, taas oo u baahan habka wax soo saar ee shaashadda wareegga wareegga si loo waafajiyo oo loo siman yahay, tayada wax soo saarku waa inay ahaato mid u qalma oo la jaan qaadeysa xeerarka qaranka, shaashadda gariirka wareegga lehna waa ay shaqeyneysaa Waa inaan fiirino haddii ay jiraan iyo in kale isbeddellada aan caadiga ahayn ee mashiinka shaashadda ee maqalka iyo aragga, sida haddii uu jiro cod aan caadi ahayn, haddii alaabtu leex leexato, haddii shaashadda ay dabacsan tahay oo xiran tahay, haddii xaaladda shaqada ee gariirka kiciyaha iyo sanduuqa shaashadda uu yahay mid aan caadi ahayn, oo hubi culeyska heerkulka isla waqtigaas.
Ku rakib Kiis
Shaashadda wareegga wareegga waa nooc ka mid ah qalabka baaritaanka budada ee saxsanaanta sare, sawaxankeeda hooseeya, waxtarkiisa sarreeya, kaliya 3-5 daqiiqo oo lagu beddelayo shaashadda, qaab-dhismeedka si buuxda u xiran Ku habboon baaritaanka sifeynta alaabada budada ah ee caagga ah.
Kala shaandheeya mashiinka taagan sida isha gariirka, labada daraf ee mootada oo lagu rakibay culeys saafiya iyo wareejinta mootada oo jiingad leh, toosan, u janjeedha dhaqdhaqaaq saddex-cabbir ah, ka dibna loo wareejiyo dusha sare ee shaashadda. Isku hagaaji xaglaha wajiga kore iyo hoose si aad u bedesho dhabbaha shaashadda dusha.
Faa'iidooyinka Shaashada Wareegga Wareegtada
Shaashadda wareegga wareegga waa nooc cusub oo shaashad gariir ah oo leh lakabyo badan iyo waxtarka sare;
Guga nuugista shoogga walaaca ayaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo buuqa;
Waxay qaadataa culeys aad u culus oo leh farqiga weyn ee saliidda, heerkulka hawlgalka oo hooseeya iyo nolosha muddada dheer;
Qaab-dhismeedka sanduuqa shaashadda iyo qaab-dhismeedka leh awood sare ayaa la qaatay;
Xidho shaashad caag ah oo adkaysi leh ayaa la bixin karaa si ay uga dhigaan waxyaabaha ku dhegan daloolka shaashadda inay ka boodaan oo ay ka hortagaan daloolka shaashadda inuu xannibo;
Waxay leedahay faa'iidooyinka awoodda wax-qabad ee ballaaran, adduun-weynaha xooggan ee qaybaha iyo dayactirka habboon.
Hore: Saxanka PVC Mindi ee Pulverizer
Xiga: Suunka Qafilan ee Magnetic-ga